मृगौलामा समस्या भएकाले दशैंमा के खाने–के नखाने ?
आइतबार, ३० जेठ, २०७८
सरकारको खोप व्यवस्थापन फित्तलो, खोप नपाउँदा लक्षित वर्ग मारमा
उपत्यकामा असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थपियो
पहिलो हाफमा इङ्ग्ल्यान्ड र क्रोएसियाको बराबरी
प्रदेश १ मा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १५ हजार सात सय ५१ पुग्यो
पाकिस्तानमा वर्षासँगै आएको हुरीका कारण दस जनाको मृत्यु
कछुवासहित चार जना पक्राउ
अनौठो कथा भएको घाँटीको रङ फेर्ने छेपारो
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : ३२ जनाकाे टिप्पणी, मुख्यमन्त्रीकाे सम्बाेधनपछि बहुमतले पारित
मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव : यही अधिवेशनबाट नामको टुङ्गो लगाऔँ
दुई हजार चार सय सात सङ्क्रमित थपिए
पोर्चुगललाई हराउँदै जर्मनीले जित्यो उपाधि
चाइनिज ताइपेईमाथि अस्ट्रेलियाको शानदार जित
चिकित्सकले भने : अब एरिक्सनले कहिल्यै फुटबल खेल्न सक्दैनन्
मुख्यमन्त्री निवासअगाडि राखिएको गाडीभित्र चालक बेहोस, अस्पताल पुर्‍याउनासाथ मृत्यु
अर्जेन्टिना र कोलम्बिया प्रतिस्पर्धामा
कोपा अमेरिका खेल्ने अर्जेन्टिनाको टोली घोषणा
मुख्य पृष्ठखानपान स्वास्थ्य जीवनशैलीमृगौलामा समस्या भएकाले दशैंमा के खाने–के नखाने ?
बुधबार, ०५ कात्तिक, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, ५ कात्तिक । कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएसँगै नेपालीहरूको महान चाड दशैंको चहलपहल सुरु भइसकेको छ ।
दशैंको बेलामा प्रायः नेपालीको घरमा मासुका विभिन्न परिकार पाक्छन् । दशैंमा अत्यधिक मात्रामा मासुजन्य परिकार खाने तर, शारीरिक कसरत भने अरु बेलाको भन्दा कम हुने भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिन सक्छन् ।
आवश्यकताभन्दा बढी मासु खाएमा बच्चा, वृद्ध र दीर्घरोगी मात्र नभई स्वस्थ मानिसको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर गर्छ ।
दशैंमा मासुका अनेक परिकारसँगै मसलेदार र अधिक चिल्लोपन भएका खानेकुरा बढी खाइने गरिन्छ । हाल कोभिडको संक्रमण हुन नदिन प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिने खानेकुराहरू खान सल्लाह दिइएको छ । तर, चाडपर्व भन्दैमा खानेकुरामा लापरवाही गरी अत्यधिक मदिरा सेवनले प्रतिरक्षा प्रणालीमा ह्रास ल्याउन सक्छ ।
मृगौला रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार बढी चिल्लो खानेकुरा र मदिराको अत्यधिक सेवनका कारण मृगौलाको कार्यमा समस्या आउनुका साथै, मृगौला फेलसमेत हुन सक्छ । मृगौलामा समस्या भएका मानिसले अत्यधिक चिल्लो, मसलेदार, रातो मासु र रक्सीको सेवन गर्नु हुँदैन । मृगौलामा समस्या हुनुको मुख्य कारण भनेको पानी नपिई अत्यधिक मात्रामा रक्सीको सेवन गर्नु हो ।
रक्सीको सेवनले शरीरमा पानीको मात्रालाई घटाई रगत बग्ने नलीलाई फुलाएर तातो रगत बगाउने हुन्छ । जसकारण शरीर तातो हुन गई पसिनासमेत आउने हुँदा शरीरमा डिहाइड्रेसन हुन सक्छ । स्वस्थ मानिसले समेत चाडवाडको समयमा रक्सीको सेवन गरी खानपिनमा ध्यान नदिँदा मृगौलाले गर्ने नियमित क्रियाकलापमा असर पर्न गई मृगौलामा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
मधुमेहको औषधि सेवन गरिरहेकाले रक्सी सेवन गरेमा मृगौला फेल हुने सम्भावना हुन सक्छ । मृगौलामा समस्या भएकालाई नुनको अत्यधिक सेवन गर्न नहुने बताइएको छ । दसैंमा कम नुन राखेर बनाए पनि धेरै परिकार हुने हुँदा खानामा नुनको मात्रामा ध्यान दिन पनि आवश्यक हुन्छ ।
त्यसैले मासुसँग अन्य भिटामिन ‘सी’युक्त खानेकुरा जस्तैः फलफूल, सागसब्जी खानुपर्छ । फलफूल र सागसब्जीले मासुबाट प्राप्त हुने फलामतत्व र पोषणलाई सोस्न मद्दत गर्छ । सागसब्जी, फाइबरयुक्त तरकारी तथा फलफूलले शरीरभित्र भएका नचाहिने चिल्लो पदार्थलाई शरीरबाहिर निकाल्ने काम गर्छ । साथै, पानी पनि प्रशस्त मात्रामा पिउन आवश्यक हुन्छ ।
एक घन्टामात्र निद्रा नपुगे हृदयघातको जोखिम !
अत्याधिक बाफ लिनाले पनि ब्ल्याक फङ्गसको जोखिम
कोभिडका कारण नङमा पनि असर देखिँदै
भारतमा बालबालिकाका लागि कोभ्याक्सिन प्रयोग परीक्षण सुरु
कोसी अनलाइन रिपब्लिक हेराल्ड मिडिया एन्ड पब्लिकेसन प्रालिद्वारा सञ्चालित समाचार पोर्टल हो । ‘सञ्चारकाे मूल प्रवाहमा फरक आयाम’ स्लाेगन राखेर सञ्चालित काेसी अनलाइनले विशेषतः खोजमूलक समाचार, विचार-विश्लेषण, अन्तर्वार्तासहितका सामग्रीलाई प्राथमिकता दिँदै आएकाे छ ।
समाचारका लागि: [email protected]
लेख/रचनाका लागि: [email protected]